BBC Somali - Warar - Roobab xooggan oo saameeyay qaxootiga
Roobab xooggan oo saameeyay qaxootiga
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Abriil, 2012, 18:40 GMT 21:40 SGA
Xeryaha qaxootiga waxaa ku jira boqolaal kun oo Soomaali ah
Hadal qoraal ah oo ay soo saartay hey'adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ee UNHCR, ayaa sheegay lagu sheegay in roobab xoog leh ay ku dhufteen xeryaha qaxootiga ee ku yaalla dalalka Kenya iyo Ethiopia.
Roobabkaasi oo sababay daaday ayaa waxa ay khasaaro u geysteen teendhooyinka iyo jidadka gala xeryaha kuwaasi oo saameyn u geystay gaarsiinta gargaarka samafalka.
Xerada Doolo Addoo ayaa waxa uu roobku burburiyay bishan April 700 oo teendhooyinka qaxootigu ay ku jiraan ah.
Xeryaha qaxootiga ee ku yaalla Dhabaab iyo Doolo Addoo ayaa waxa ka buuxa boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah oo ka cararay dagaallada sokeeye iyo colaadda ka taagan Soomaaliya.
UNHCR waxa ay sheegtay in maalin walba ay xerada qaxootiga ee Doolo ay yimaadaan qaxooti hor leh.